Faah faahin ka soo baxaysa weerar ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Faah faahin ka soo baxaysa weerar ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari ee...
Faah faahin ka soo baxaysa weerar ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
Kenya(SNTV) Weerarkan ayaa dad xog-ogaal ah oo deegaanka ah ay sheegeen inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Shimbir Faatumo oo ku taalla Koonfurta Mnadera ee Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya,kaasi oo dad rayid ah uu qasaar eka soo gaaray.
Ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta maamulka Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Sida uu qorey Wargeyka lagu magacaabo The Daily Nation ee ka soo baxa wadanka Kenya oo soo xiganaya Madaxa Ammaanka ee Gobolkaasi ninka lagu magacaabo Kutswa Ololka ayaa wuxuu qorey wargeysku in la rumeysan yahay in weerarkaasi ay geysteen maleeshiyaad xiriir la leh koxda Alshabaab,wuxuna intaasi ku daray in aan weli sirasmi ah u cadayn qasaaraha rasmiga ah ee halkaasi k adhashey.
Wararka ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Kenya ayaa wadaan howlgalo lagu baadi goobayo ragii weerarkaasi ka dambeeyey.
Laamaha ammaanka Dalka Kenya ayaa ku jira heegan ballaaran,tan iyo markii maleeshiyaadka argagaixisada ah ee Alshabaab ay kordhiyeen weerarada ay k ageysanayaan gudaha dalkaasi Kenya,waxaana dhowr jeer oo horey ay weeraro k ageysteen qeybo kamid ah Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya,sida Gaarisa iyo Mandheere,iyadoo inta badan laga hortagay dhagaraha ay u soo maleegaan shacabka.
Previous articleWasiirada Khayraadka Biyaha ee Jaamacadda Carabta oo shir ugu soo geba geboobey Kuwait
Next articleMunaasabad lagu Walaalaynayay Ciidamada Soomaaliyeed oo ka dhacday Muqdisho